Zimbabwe's Mnangagwa regime rocked by infighting - The Zimbabwe Mail
HomeMainZimbabwe’s Mnangagwa regime rocked by infighting
Zimbabwe’s Mnangagwa regime rocked by infighting
HARARE – President Emmerson Mnangagwa fired controversial politician Energy Mutodi following accusations that he was part of a faction undermining the Zanu-PF leader amid allegations of fissures in his government.
The onslaught against Mutodi escalated yesterday after Zanu-PF’s Mashonaland East provincial executive said he would be charged with undermining party leaders.
Meanwhile, Zanu-PF Mashonaland East said Mutodi had been removed from his position in the provincial executive pending a disciplinary hearing.
This followed a hastily arranged meeting of the Zanu-PF provincial executive in Murewa.
Alexander Rusero, a media expert, said Mutodi had failed to read the politics in Zanu-PF and got carried away.
“If you look at the position of SB Moyo and Mutsvangwa in Zanu-PF and their stature to Mnangagwa, I think they are what Rex Nhongo was to (the late) Robert Mugabe.
Factionalism had ebbed in Zanu-PF following the ouster of Mugabe in a military coup in 2017, but camps are beginning to emerge pitting Mnangagwa’s supporters against those of Chiwenga.